Berbatov oo rajaynaya inuu mar kale dib ugu soo laabto Horyaalka Ingiriiska – Gool FM
Haaruun December 29, 2016
(London), 29 Dis 2016 –Kabtankii hore ee xulka Qaranka Bulgaria Dimitar Berbatov ayaa weli koox la’aan ah tan iyo markii ay fasaxday kooxdiisii hore ee PAOK Salonika ee Giriigga Bishii June ee sanadkan.
Emil Dantchev, Wakiilka Dhaliyihii hore ee Manchester United Berbatov oo la hadlayay BBC-da ayaa u sheegay in laacibku weli rajaynayo in uu sanad kale sii ciyaaro isla markaana uu bar tilmaameedsanayo Horyaalka Ingiriiska.
Berbatov oo 35 jir ah ayaa aad u garanaya Premier League maadaama uu 9 sanadood ka soo ciyaarayay isagoo u soo saftay kooxaha Tottenham, Fulham iyo Manchester United, waxaana uu dheelay isu geyn 229 kulan oo Horyaalka Ingiriiska ah.
Ciyaaryahan Berbatov waxa uu qayb ka ahaa xiddigihii Manchester ee ku guuleystay Horyaalladii Ingiriiska 2009 iyo 2011 waxaana Kobta Dahabka ah ee ragga ugu gool dhaliska badan Ingiriiska ay 2011 mar ku wada guuleysteen isaga iyo Ciyaaryahan Carlos Tevez (Man City) kaddib markii labaduba wada dhaliyeen min 20 gool.
Berbatov iyo Kobtii Dahabka 2011
Neymar oo marka uu ka tago Barcelona qorsheynaya inuu ku biiro naadigan......